FITSARANA : Tanjona ny hampahafantatra ny marina sy hanakaikezana ny vahoaka
Miezaka hatrany, manarina ny tontolon’ny Fitsarana eto Madagasikara ny eo anivon’ny Minisiteran’ny Fitsarana. 2 décembre 2021
Ny vahoaka no andrianina, ka tsy atao tompon-trano mihono, hoy ny Minisitry ny Fitsarana, Imbiki Herilaza. Ho porofon’ny tarigetra, ny fitandroana ny mangarahara. Maromaro ireo raharaham-pitsarana voasokajy ho mafampana nitondrany fanazavana sy fanamarihana. Anisan’ izany ny tsy fahitana ireo voafonja miisa 22 (tarehimarika ofisialy hatreto anaty fanadihadiana mandeha) tao amin’ny fonjan’i Miandrivazo, ny fikasana hanondrana vato sarobidy ka tratra, ny fandosiran’olona vitsivitsy any ivelany nefa manana raharaham-pitsarana eto Madagasikara.
Eo koa ny momba ny fampiasana ireo tambazotran-tserasera tsy am-piheverana ka lasa mivaona. « Tsy maintsy hampahafantarina ny vahoaka ny marina rehetra momba ireo. Mandala ny mangarahara ary tsy hanaiky velively izay tsy fanarahan-dalàna amin’ny endriny rehetra ny tenako. Tsy maintsy hajaina kosa ny lalàna mifehy ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana. Tahaka izany koa ny fanajana ny fahaleovantenan’ny Fitsarana », hoy ny Minisitra Imbiki Herilaza.
Amin’izao fotoana izao, nanokatra fiaraha-miasa amin’ny Fikambanana iraisam-pirenena ho an’ny asa na OIT koa ny Minisiteran’ny Fitsarana. Ny fiverenan’ny voafonja eny amin’ny fiarahamonina no vontoatin-dresaky ny roa tonta nandritra ny fihaonana. Naneho ny fahavononany amin’ny fanohanana akaiky ry zareo avy amin’ny OIT. Teboka maromaro kosa no nivohitra nandritra ny fihaonana. Anisany, ohatra, ny tetikasa fanampiana ho fanomanana ny fiverenan’ireo voafonja eny anivon’ny fiarahamonina, voalaza eo ambony eo koa ny fijerena ireo voafonja tsy ampy taona amin’ny alalan’ny Tetikasa SAVABE.